Filannoowwan irraa akkaataawwan haarawa uumu
Akkaataa durumaan jiru dhangi'uu hujeekaa itti hojii irra oolchuu irraa akkaataa haarawa daftee uumuu dandeessa.
Sajoo akkaakuu haalataa isa uumuu barbaaddu cuqaasi.
Sajoo Filannoo irra Akkaataa Haaraa cuqaasitii baafata xiqqaa irra Filannoo irra Akkaataa Haaraa fili.
Maqaa sanduuqa Maqaa Akkaataa keessatti barreessi.
Akkaataa haarawa harkisuufi-kaa'uudhaan uumuuf:
Akkaataa isa garagalchuuf barbaadduu keessaa, yoo xinnaate arfii, yk wanta tokko fiadhu. Akkaataalee fuulaa fi goodayyaatiif, fuulaa ykn goodayya keessaa yoo xinnaate arfii yk wanta tokko fili.
Qajojiiwwanii fi Akkaataalee
Haalata dhangii guutuu keessatti akkaataalee fayyadamuu
Title is: Filannoowwan irraa akkaataawwan haarawa uumu